Mbeu yebhuruu Crisp | MyWeedSeeds.com
Kureba: kusvika 29.5in | 75cm
Mbeu dzeBlueberry Crisp mbanje dzinokura kuva chinonakidza chinonaka-bheri-chakasimwa chine hwakasimba hunoratidza hunhu. Iye ndiye mhedzisiro yekuyambuka chembere bheri mbanje genetics ine yakasimba kwazvo Chiedza chaJah (a Jack Herrer mbanje yakayambuka) dzakasiyana. Akave akarerwa kanoverengeka kuti aderedze nguva yake yemaruva nemamwe mavhiki maviri. Iyo Blueberry Crisp mbanje chirimwa chakakora uye chakasimba. Pasi pemamiriro akakwana, iye anogadzira cannabis bud mugadziri, ane akaomarara uye anopenya mabwe eresini yebhuruu yakadzika uye violet hue - yakafukidzwa neTC makristasi. Mbeu dzinogona kuburitsa mbanje mbesa ine inoshamisa nzvimbo yepakati cola (pamusoro bud). Blueberry Crisp isarudzo yakanakisa yegungwa regirini (SOG) kana skrini yegreen (SCROG) kurima. Miti yakapera inopa ambrosial tutti frutti kunhuwirira uye kuravira. Kukwirira kwake kuri pachena uye kunonakidza kwehuropi euphoria, iyo inosanganisira inogutsa chiratidzo chemuviri buzz.